Ikebukuro (3rd April)
Events • Apr 7, 2021
In order to raise awareness in Japan regarding current situation of Myanmar, we Myanmar did an activity of sharing flyers, pocket tissues and Bookmarks at crowded place, Ikebukuro Station East Exit as third week.
Starting from 1pm, local police procted us with casual wears. From 1pm till 4pm, total number of 1500 flyers, 2000 pocket tissues and about 500 bookmarks have been handed to the Japanese citizens directly.
We would like to express our gratitude to those over 70 volunteers who came and helped us.
အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံက လူတွေ ပိုသတိထားမိအောင် မြို့လယ်ခေါင် လူစည်ကားတဲ့ ဘူတာတွေ မှာ လက်ကမ်းစာစောင် ၊ တစ်ရှူးနဲ့ Bookmark များ ဝေတဲ့ တတိယအပတ်မြောက် အစီအစဉ်လေးကို တိုကျိုမြို့ အိခဲဘုကုရို ဘူတာ အရှေ့ဘက် ထွက်ပေါက်ရှေ့မှာ ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူ စုပေါင်းပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
✍️မွန်းလွဲ ၁ နာရီက စတင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အရပ်ဝတ်ဖြင့် လာရောက်စောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအတွင်း လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၁၅၀၀၊ တစ်ရှူးထုပ် ၂၀၀၀ နဲ့ BookMark ၅၀၀ ခန့်ကို ဂျပန်ပြည်သူတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
🥰လာရောက်ကူညီ အားဖြည့်ပေးတဲ့ Volunteers ညီအကို မောင်နှမ အယောက် ၇၀ ကျော်ကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်။
Likes & Follow လေး လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်